Baịbụl Ogologo Ya Hà Ka Mmadụ Maka Ndị Ìsì
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chol Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Fante Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hindi Hungarian Igbo Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kinyarwanda Konkani (Roman) Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Nahuatl (Central) Norwegian Nzema Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Rarotongan Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Totonac Tsonga Turkish Turkmen Tzeltal Tzotzil Ukrainian Uzbek (Roman) Valencian Xhosa Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Baịbụl Ogologo Ya Hà Ka Mmadụ
Tupu ị sị Ndịàmà Jehova wetara gị Baịbụl e dere ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì, jide n’aka na i nwere ụlọ ị ga-ebuba ya. Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ e nwere ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì n’asụsụ Bekee, Spanish, na Ịtalian dị n’ùkwù n’ùkwù. Nke kacha ntakịrị dị ùkwù iri na asatọ. Nke kachanụ dị iri abụọ na asatọ. Ebe ga-aba ya ga-aha ka ebe ga-aba mmadụ.
Ụdị ihe ndị ọzọ ndị ìsì nwere ike iji agụ akwụkwọ anaghị eburucha ibu ka Baịbụl a. Dị ka ihe atụ, e nwere obere kọmputa ndị ìsì nwere ike iji dee ihe ma ọ bụ gụọ ihe e dere ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì. Kọmputa a nwere ebe ndị ìsì ga na-emetụ aka, ya adịkwa ha ka ebe ha na-agụ ihe e dere ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì. E nwekwara ihe a na-etinye na kọmputa, ya ana-agụpụta ihe e dere na ya agụpụta. Ndị ìsì nweziri ike iji kọmputa gere ihe ndị e dere n’akwụkwọ anyị.
Ndịàmà Jehova emepụtakwala ngwá ọrụ kọmputa ga na-ebipụta akwụkwọ anyị ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì n’ọtụtụ asụsụ. E tinyechaa ihe e dere n’akwụkwọ anyị ná ngwá ọrụ a, gwakwa ya mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì ọ ga-eji bipụta ya, ọ na-ebidozi biwe ya. Ọ na-ebipụtakwa ya otú ọ ga-adịrị ndị ìsì mfe ọgụgụ. Ngwá ọrụ a ga-eme ka e nwee ike ibipụta ma akwụkwọ anyị dị iche iche ma Baịbụl ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì ọ bụla dịnụ.
Ọ karịala otu narị afọ Ndịàmà Jehova bipụtawara akwụkwọ anyị ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì. Ụdị mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì anyị na-ebipụtazi akwụkwọ anyị ugbu a dị iri na itoolu. Ọ bụ eziokwu na ndị ìsì nwere mmasị nwere ike inweta akwụkwọ ndị a n’akwụghị ụgwọ, ma, ọtụtụ ndị na-enye ego ole ọ bụla si ha n’obi.
Mgbe mbụ, ọ na-abụ e wepụta akwụkwọ ọhụrụ ná mgbakọ, a gwa ndị chọrọ nke ndị ìsì ka ha tụọ ọda ya ma ha laruo. Ma n’afọ gara aga, alaka ụlọ ọrụ anyị dị n’Amerịka jụtara ọgbakọ ndị ha na-elekọta ma è nwere ndị ìsì ga-eso ha aga mgbakọ. Ha jụtakwara ha ndị ìsì ole ga-achọ akwụkwọ ọhụrụ e wepụtara n’ụdị nke a na-etinye na kọmputa, na ndị ga-achọ nke e biri n’akwụkwọ nkịtị.
E bugaziri akwụkwọ ọhụrụ ndị e biri ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì ná mgbakọ ndị ìsì ga-aga, ya emezie ka ndị ìsì nweta akwụkwọ nke ha mgbe ndị ọzọ nwetara nke ha. Mgbe e nwechara mgbakọ ahụ, otu izu agaa, e sizi n’iimel zigara ụfọdụ ndị ìsì ụdị nke a na-etinye na kọmputa.
Otu nwanna nwaanyị bụ́ onye ìsì sịrị na obi tọrọ ya ezigbo ụtọ mgbe a na-enye mmadụ niile akwụkwọ ọhụrụ e wepụtara, e nyekwa hanwa nke ha e biri ná mkpụrụ akwụkwọ ndị ìsì. Ọ sịrị na ihe e kwuru n’Abụ Ọma 37:4 emezuola n’isi ha n’ihi na Jehova enyela ha ihe ha na-arịọ ya. Nwanna ọzọ bụ́kwa onye ìsì nọ na-ebe ákwá na-ekele Jehova maka otú o si meere ha ihe ọma ha otú a.
Vidio: “Ma Ọ́ Bụghị Ya, M Gaaraghị Ama Ihe M Ga-eme”
Aka M Ka M Ji Ahụ Ụzọ